Manao Tompody Fohy i ‘Dikan’ Tantara an-Tsary Yogoslavy Milaza Fa Misy Lafiny Maha-Taranaka Mpifindra-monina Hatrany Antsika Rehetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2016 5:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 日本語, русский, Italiano, Ελληνικά, English
“Lasa miaina ao anaty aterineto ihany koa izahay Slavy Voalohany. Miarahaba anareo tongasoa sy hahazo fahafinaretana izahay.” Sary naseho tao amin'ny tranonkala Dikan.rs .
Novelomina indray tamin'ny alàlan'ny boky navoakan'ny famoaham-boky Serba i Dikan, iray amin'ireo tantara an-tsary mampihomehy malaza indrindra tao Yogoslavia efa maty ankehitriny.
Tamin'ny taompolo 1970 sy 1980 no be mpamaky indrindra i Dikan ary nanaraka azy ny tantara sy ilay mpiantsehatra Dikan miaraka amin'ny dadatoany Vukoje nirenireny tany Balkans tamin'ny andro fahiny. Noforonin'i Lazo Sredanović araka ny hevitra avy amin'i Nikolа Lekić, tonian-dahatsoratra sady mpanoratra tantara ao amin'ny gazetiboky Politikin Zabavnik, ny tantara an-tsary. Io Nikolа Lekić io no naka sary an-tsaina an'i Dikan ho endrika Yogoslavy mifanahaka amin'ilay tantara an-tsary Frantsay Asterix, izay mampifangaro ny hatsikana azon'ny rehetra sy karazana esoeso maivana tamin'ny fametrahana rafitra ara-tantara.
Novakiana androany, amin'ny fotoana tsy dia tena malala-tanana amin'ny fandraisana ireo mpitsoa-ponenana betsaka indrindra hatramin'izay mitady fialofana ao amin'ny kaontinanta ny fitondram-panjakana Eoropeana sasany, dia nanararaotra ny zava-misy i Dikan amin'ny fampahatsiahivana fa anisan'ny karazana taranaka mpifindra monina daholo isika rehetra .
Lany avy hatrany ny boky namidy voalohany, ary tena nahomby toy izany ihany koa ny boky faharoa hany ka nikasa ny hamerina famoahana izany indray ny mpamoaka boky, ary hamoaka boky roa hafa ihany koa miaraka amin'ny ambin'ny tantara an-tsarin'i Dikan farany – mitotaly efatra ny dika fanavaozana ny boky. Namoaka santionany mampihomehy tamin'ny tantara an-tsary tao amin'ny media sosialy ihany koa izy ireo, tahaka ity drafitra fitaovana iray izay fandrefesana ny olona mafy loha na be di-doha ara-bakiteny ity avy any amin'ny tanin'ny Sarmatiana -.
(Asio menaka tsara alohan'ny ampiasana azy!) Mijoro eo amin'ny sehatra B ny lehilahy iray A izay hamarinin'ny fandanjana C ny halavany. Miakatra eo amin'ny halavan'ny E ny maritoa D ary avy eo avotsotra mba hikapohana ny lohan'i A. Mitovy amin'ny hamafisan-doha ny fikapohan'ny maritoa noho izany manondro any amin'ny refin'ny hamafisan-doha ny fanondroana F” Asakanton'i Lazo Sredanović.
Maneso indrindra ny iray amin'ireo mponina maro izay mifindra monina manerana an'i Eoropa nanomboka tany ho any amin'ny taonjato fahadimy tany ny tantara an-tsary mampihomehy Dikan: Ireo Slavy voalohany izay manana ny kolontsaina sy foto-tarazo fototra tamin'ny fananganana ireo Vahoaka Slavy ankehitriny ka nanome ny ankamaroan'ny mponina ao Eoropa afovoany sy Atsinanana .
“Slavy Ntaolo” amin'ny dikany hoe “Taloha” no voambolana fampiasa ao an-toerana ireo mponina fahiny ary ampiasain'ny tantara an-tsary kosa ny “Slavy vaovao” rehefa te hilaza ireo mpamaky amin'izao fotoana izao. Ao amin'ny tantara an-tsary voalohany, manao karazana mpisafo tany misava lalana i Dikan sy ny dadatoany mandeha mamantatra an'i Balkans talohan'ny niorenan'ny Slavy.
Taorian'ny faharavan'i Yogoslavia tamin'ny taompolo 1990, dia te-hampangina ny Fifindra-monina Goavan'ny Mponina maro ireo mpahay tantara nasionalista te-handrafitra indray ny tantara nahatonga ireo firenena maro an'isa Slavy, niezaka ny hanaporofo fa teo antanindrazany hatrizay (nisiany) ny mponina ao aminy, ary “vahiny vaovao” kosa ny hafa rehetra. Nampiasaina hanaovana fanentanana nasionalista any amin'ny firenena Balkan tsy Slavy ihany ihany koa, anisan'izany i Gresy, Albania, Kosovo ary Romania ny finiavana hanaporofoana fa fananan-drazany ny zaratany izay nahatonga azy ireo hanana sata manokana ambony noho ny hafa.
Taty aoriana, nivoaka tamin'ny maha-izy azy tany am-boalohany ny tantara an-tsary mampihomehy Dikan ka lasa mitovitovy amin'i sarimihetsik'i Mel Brooks “Tantaran'Izao Tontolo Izao, Fizarana I,” anisan'izany ny Vanim-Potoanan'ny Vato (Stone Age) sy ny ho avy mbola lavitra, maneho an'i Yogoslavia amin'ny endrika hay famoronan-tantara maneso azy ho firenena matanjaka eto amin'izao tontolo izao.
Emperora Justinian, endrika amantarana azy .
Manolotra fanazavana fototra momba ny ezaka famoaham-boky indray amin'ny fomba mahatsikaiky ihany koa ny tranonkala ofisialin'i Dikan. Asongadiny ny “fijoroana vavolombelona” amin'ny alalan'ireo mpiantsehatra sasany ao amin'ny tantara an-tsary mampihomehy, ary anisany ny olo-malaza ara-tantara sasany, toy ny amperora Byzantina Justinian, ilay niverina ho mpandresy indray sy teraka ho mpampanaja lalàna tao Balkans:
Nilaza tamiko ny olona rehetra , Justinian, amperora tahaka ny ahoana re ianao … Na izany aza, inona no anontanianao ? Ny hevitro momba an'i Dikan? Ah, tena mahasorena ireto Slavy Tranainy ireto. Karazandrazany anelanelan'ny mpifindra-monina tsy ara-dalàna sy ny mpitady fialokalofana ara-politika. Tsy azo fehezina izy ireo. Noho izany ,dinganiko io fanontaniana io.